Ii-FAQs - iShanghai Yangli Ifenitshala yezixhobo zeFektri, Ltd.
Umbuzo kunye neempendulo
1. Ngaba uthengisa inkampani okanye i-manufactur?
Singumenzi wempahla yefanitshala yobuchule ukusukela ngo-1999.
2. Indlela yoku-odola?
Nceda usithumelele iodolo yakho yokuthenga nge-imeyile okanye ngefeksi, okanye ungasicela ukuba sikuthumele i-invoice yePerforma kwi-odolo yakho. Kufuneka sazi olu lwazi lulandelayo kwiodolo yakho:
1) ulwazi Product: Ubungakanani, iinkcukacha (ubukhulu, izinto, umbala, ilogo kunye nokupakisha imfuneko), umsebenzi wobugcisa okanye Sample iya kuba yeyona ilungileyo.
2) Ixesha lokuhambisa elifunekayo.
3) Ulwazi lokuhambisa: Igama lenkampani, idilesi, inombolo yomnxeba, izibuko lokufika / isikhululo seenqwelomoya.
4) Iinkcukacha zonxibelelwano zomhambisi ukuba zikhona e-China.
3. Iyintoni yonke le nkqubo yokwenza ushishino nathi?
1. Okokuqala, nceda unike iinkcukacha zeemveliso ozifunayo esizicaphulayo kuwe.
2. Ukuba ixabiso liyamkeleka kwaye abathengi bafuna isampulu, sinikezela nge-Invoice yePerforma kumthengi ukuba ahlele intlawulo yesampulu.
3. Ukuba umthengi uvumile isampulu kwaye ufuna iodolo, siya kubonelela ngePerforma Invoice yomthengi, kwaye siya kulungiselela ukuvelisa kwangoko xa sifumana idipozithi engama-30%.
4. Siya kuthumela iifoto zazo zonke iimpahla, ukupakisha, iinkcukacha, kunye nekopi ye-B / L yomthengi emva kokuba kugqityiwe iimpahla. Siza kwenza amalungiselelo okuhanjiswa ngenqanawa kunye nokubonelela nge-B / L yoqobo xa abathengi behlawula imali eseleyo.
4. Ngaba ilogo okanye igama lenkampani liya kuprintwa kwiimveliso okanye kwiphakheji?
Ngokuqinisekileyo. Ilogo yakho okanye igama lenkampani linokuprintwa kwiimveliso zakho ngokungqisha, ngokuprinta, ngokwenza i-embossing, okanye isitikha. Kodwa MOQ kufuneka ibhola ethwele izilayidi ngaphezu 5000 iiseti; isilayidi esifihliweyo ngaphezulu kweeseti ze2000; izilayidi zodonga oluphindwe kabini ngaphezulu kwe-1000; iihenjisi ze-oveni ngaphezulu kweeseti ezili-10000; iihenjisi zekhabhinethi ngaphezulu kwe-10000 ii-pcs njl.
5. Yintoni imiqathango yakho yentlawulo?
Intlawulo <= 1000USD, 100% kwangaphambili. Intlawulo> = 5000USD, 30% T / T kwangaphambili, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa.
Ukuba uneminye imibuzo, pls zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi nge-imeyile: yangli@yangli-sh.com.
6. Ziziphi izinto eziluncedo esinazo?
1. QC engqongqo:Kwi-odolo nganye, uhlolo olungqongqo luya kwenziwa lisebe le-QC ngaphambi kokuhambisa. Umgangatho ombi uya kuthintelwa ngaphakathi komnyango.
2. Ukuhambisa ngenqanawe: Sinesebe lokuthumela kunye nokudlulisa phambili, ke sinokuthembisa ukuhanjiswa ngokukhawuleza kwaye senze iimpahla zikhuselwe kakuhle.
3.Ukuveliswa kwemveliso yethu efihliweyo kwizilayidi, izilayidi zebhola, izilayidi zeetafile kunye neehenjisi ze-oveni ukusukela ngo-1999.
7. Kutheni isilayidi sokuvala esithambileyo singasebenzi kakuhle?
Unobangela wokungasebenzi kakuhle kwesilayidi esihlala singumphumo wezi zinto zilandelayo ngexesha lofakelo, nceda uhlole ngokwale nkqubo ilandelayo:
(1) Jonga indawo esecaleni (ukucoca).
Kuqala jonga indawo esecaleni phakathi kwekhabethe kunye nedrowa iphakathi kokunyamezelana. Nceda ujonge kwimveliso esecaleni ehambelana nayo (ukucoca) imiyalelo kwiFenitshala, kwiphepha lokufikelela kwiKhitshi. Nceda unxibelelane nomenzi wekhabhinethi ukuba indawo esecaleni yekhabhinethi (imvume) ingu-1mm omkhulu kunonyamezelwano oluchongiweyo.
(2) Hlola ulwakhiwo lwekhabhinethi kunye nedrowa.
Ukuba unyamezelo olufanelekileyo lwendawo esecaleni (ukucoca) iphakathi kwe-1mm, nceda ulandele isikhokelo sokujongana nokujongana neengxaki ukwenza uhlolo lwekhabhinethi ukuqinisekisa ukuba ikhabinethi yakha ukuchaneka kwekhabhinethi. Ikhabhinethi kunye nedrowa kufuneka zikwimeko efanelekileyo yesikwere kunye noxande. Ukuba idrowa okanye ikhabinethi ayihambelani okanye ikwimilo yedayimane, iya kuchaphazela ukusebenza kwesilayidi sokuvala esithambileyo.
(3) Jonga ufakelo lwesilayidi sedrawer
Ukukhupha idrowa kunye nekhabhathi, cinezela kwithebhu yokukhululwa kwelungu elingaphakathi kwaye ukhuphe idrowa ukuze ubambe. Qiniseka ukuba ilungu eliphakathi nelangaphandle liyafana kwaye liyalinganiswa, kwaye ilungu elingaphakathi limiselwe ngokuqinileyo kwipaneli yangaphambili yedrowa kwaye ilinganiswe kakuhle. Iinkcukacha zokufakwa kwesilayidi ziya kuchaphazela ukusebenza kwesilayidi. Ukuba ikhabinethi yakho ihlangabezana nazo zonke ezi mfuno zingentla, kwaye iingxaki zisekhona, nceda ungathandabuzi ukuqhakamshelana nathi, kwaye ingcali iya kwabelwa ukukunceda
Ukulungiselela ikhabhinethi ukuthobela le mfuno ingentla kodwa isasilele ukusebenza kakuhle, nceda unxibelelane nathi ukuze ufumane uncedo olungaphezulu.
8. Kutheni utyhala isilayidi esivulekileyo unomgama omfutshane wokukhupha, okanye ungakwazi ukwenza umsebenzi ovulekileyo?
Isilayidi esivulekileyo sePush asizukusebenza ngokufanelekileyo ukuba isithuba secala (ukucoca) singaphandle kokunyamezelana okuchaziweyo. Nceda ujonge ulwazi ngemveliso kwiphepha leFanitshala yeKhitshi.
9. Ndiyisombulula njani ingxolo yesilayidi esivulekileyo?
Okokuqala jonga isilayidi esiphakathi kunye nelungu langaphandle zifakelwe zangqinelana kwaye zangqinelana nodonga lwekhabhathi. Xa isilayidi singafakwanga kakuhle, ingxolo inokubangelwa kukuphazamiseka kwendlela, ngaloo ndlela unciphise umgama wokukhutshwa kwesilayidi.